SAWIRADA TARANKA EEYGA EE LOO YAQAAN 'YORKIPOO DOG', 3 - EEYAHA
Sawirada Taranka Eeyga ee loo yaqaan 'Yorkipoo Dog', 3
Yorkshire Terrier / Poodle Dogs Nooc Isku Daran
Jaxon the Yorkie-Poo oo jira 2½ sano, culeyskiisuna yahay 5 rodol
Mollgan the Yorkie-Poo, sawirka waxaa iska leh Barbue Beauties Bichon Yorkie iyo Yorkipoos
Magaca Yorkie-Poo waa Smuce Funkelstein. Hooyadiis waxay ahayd Ciyaaraha Poodle aabihiisna wuxuu ahaa Yorkshire Terrier .
Murphy eeyga yar ee la jeclaan karo ee Yorkipoo ah — yaanan u oggolaan inay ½ ½ pounds kaa dhigto inay ku khiyaanayso iyada waa hal ey weyn oo ku jira jir yar. Gabi ahaanba iyadu waa boqoradda Beela gurigeenna!
Pinpon, oo ah 4 bilood jir Yorkipoo
Hunter the Yorki-Poo oo ah eey yar oo 6 toddobaad jir ah, miisaankiisuna gaarayo 1.25 rodol (.69 kg)
Ugaarsade Eeyga Yorki-Poo ee jira 4-bilood
Maggie oo reer Brazil ah markii uu jiray 18 bilood
Mahjong oo ah haweeneyda Yorkie-Poo, sawirka waxaa iska leh Barbue Beauties Bichon Yorkie iyo Yorkipoos
Pele Yorkiepoo 9 toddobaad
Pele wuu koray
Chewie waa fasalka F1b-ka Yorkipoo.
Yorkipoo eey yaryar oo yaryar ah, Beatnee iyo Sonkor Butt markay jiraan 3 bilood
'Kani waa sawirka la casriyeeyay ee Malik oo jira 7 sano. Weli waa 8 lbs oo wali wuu jecel yahay kubbadiisa qulqulaya. Dad badan ayaa ka helay sawirkiisa eey yar gaariga dhexdiisa (hoose). Halkan ayuu ku socdaa si uu u soo qaado walaashiisa ka yar ee Kona, oo 4 jir ah Staffordshire Bull Terrier . Sawirka labaad waa iyaga oo gaariga ku jira oo guriga dib ugu noqonaya daryeelka maalinta ee doggie. '
'Malik waa mid aad u caqli badan Yorkshire Terrier / Poodle mix (F1b). Sawirkan waa 19 bilood miisaankiisuna waa 8 rodol. Waa maalin dabayl ay tahay park eey . '
Waxaan ku tababbaran jirnay khiyaanooyinkiisa qaybo yaryar oo jiis ah / dawaynta eyga ah, laakiin waxaan ogaanay in abaalmarintiisa uu jecel yahay, oo uu aad ugu qiimeeyo, ay tahay Hawada yar ee Air Dog Squeaker ee ay leedahay Kong. Waxay ku habboon tahay afkiisa waxayna umuuqataa inuu dhoola cadeynayo markuu ku haysto gudaha. Waa kan Malik oo wata alaabtii uu jeclaa. '
Sawirada Yorkipoo Bogga 1
Sawirada Yorkipoo Bogga 2
Sawirada Yorkipoo Bogga 3
dachshund schnauzer iskudhaf eeyo yaryar oo iib ah
ma eey lab ah baa la dagaallami doona eey dumar ah
kala badh feedh badh dahab celis ah
Carlin muqisho pinscher for sale